By VOA + GO , Mareykanka
Dacwad oogayaal federal ayaa sheegay in saddex nin oo degan gobolka Michigan lagu soo oogay dacwad ku saabsan inay shirqoolayeen inay qalab ku taageeraan kooxda Daacish.
Waxa ay sheegeen in FBI-da ay Isniintii xirtay Muse Abdikadir Muse, Mohamud Abdikadir Muse iyo Mohamed Salat Haji, waxaana dadkan oo degan magaalada Lansing kiis dacwaeedkooda la diiwaan geliyey talaadadii.
Dacwad oogayaasha waxay ay sheegeen in dhammaan saddexda eedeysane ay yihiin muwaadiniin qaatay dhalashada Mareykanka oo ku dhashay dalka Kenya.
Weli ma cadda in Muse Abdikadir Muse iyo Mohamud Abdikadir Muse ay walaalo yihiin iyo in kale.
Waraaqaha lagu qoray dacwadooda ayaa muujinaya Muse Abdikadir Muse uu horaantii bishan goostay tikit diyaarad oo uu ku aadi lahaa magaalada Muqdisho, isaga oo ka baxaya magaalada Grand Rapids.
Warbixinta ayaa lagu shaaciyay in AMISOM aysan awoodin inay amni ka dhigto Somalia kahor 2021.
Xaaska hogaamiyaha Daacish-ta Somalia oo dalbaneysa magdhow [Sababta]
Soomaliya 05.02.2019. 10:37
Safiirka Soomaaliya ee Mareykanka oo sanad kadib la magacaabay
Soomaliya 16.07.2019. 18:09